Dhexdhexaadinta Guryaha - Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota
Ilaa iyo bilowgii masiibada, CMM ayaa bixisay BILAASH adeegyada dhexdhexaadinta fog ee dadka ay la kulmaan dhibaatooyinka kirada iyo adeegyada. Waanu ku shuraakoobay https://www.renthelpmn.org in la siiyo adeegyo dhexdhexaadin fog oo loogu talagalay mulkiilayaasha, kiraystayaasha, iyo mulkiilayaasha guriga.
Haddii aad ka welwelsan tahay gurigaaga ama adeegyada korontada, waxaan kaa caawin karnaa inaad u diyaargarowdo wadahadalka mulkiilahaaga iyo/ama shirkadda korontada.
CMM waxay ku bixisaa adeegyada dhexdhexaadinta fog ee gobolka Minnesota oo dhan telefoon ahaan iyo qaabab online ah sida Zoom. Waanu kula shaqayn doonaa si aanu u go'aansano doorashada/ikhtiyaarada sida ugu fiican ugu shaqayn doona xaaladaada. Sida dhexdhexaadinta fool-ka-fool ah, waxaad heli doontaa fursad lagu maqlo oo lagu maqlo, iyo si aad u abuurto xal u shaqeeya dhammaan.
COVID-19 Guryaha & Dhexdhexaadinta Utilities waxa loo bixiyaa sidii a BILAASH adeegga.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan adeegyada dhexdhexaadinta fog, halkan ka codso dhexdhexaadin ama wac 1-833-266-2663.
Haddii aanad codsan gargaar weli, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo dhexdhexaadinta, fadlan la xiriir CMM iyo halkan ka codso dhexdhexaadin ama wac 1-833-266-2663.
Haddii aanad codsan gargaar, laakiin waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo, halkan waxaa ah hay'ado ku caawin kara:
Kirada ama Kirada + Adeegyada:
Kaalmada Korontada iyo Gaaska KALIYA: